Sida lacag looga sameeyo TikTok | Wararka ECommerce
Sida lacag looga sameeyo TikTok
Encarni Arcoya | | Ganacsiga bulshada
TikTok waa mid ka mid ah shabakadaha bulshada ee dhaqan galay waxayna ku guulaysatay inay u kaxayso taageerayaal badan oo Instagram ah iyo shabakadaha kale ee bulshada dhulkeeda. Dhab ahaantii, waxaa suurtagal ah in ay tahay mid ka mid ah kuwa weli la doortay muddo dheer, gaar ahaan tan iyo isbeddellada noo horseedaan in video ka badan image. Laakiin, Sidee lacag looga sameeyaa TikTok? Ma la qaban karaa?
Hadii aad ku fikirayso inaad xisaab furto oo aad rabto inaad ogaato in dadaalka aad u hurayso inuu leeyahay abaalkiisa, markaa waan ka hadli doonaa. Waxaad arki doontaa waxa aad ka heli karto shabakadan bulshada.
1 TikTok, maxaa fiiro gaar ah u leh?
2 Sida lacag looga sameeyo TikTok: siyaabaha kala duwan ee loo helo
2.1 Iyada oo la adeegsanayo muuqaallo muuqaal ah
2.2 Toos u tabin
2.3 Noqo mid saameeya
2.4 Lacagta TikTok
TikTok, maxaa fiiro gaar ah u leh?
Diirada dareenka, iyo wakiilka ugu badan ee shabakadan bulshada, waa qaabkeeda. Suurtagalnimada in la abuuro muuqaalo iyo in ay fayras galaan waxay ka dhigtay mid ka mid ah kuwa ugu soo ifbaxaya iyo xaqiiqda ah in dhagaystayaasheeda bartilmaameedka ah, in kasta oo qaar badan ay u maleynayaan inay yihiin dhalinyaro kaliya, dhab ahaantii waa isticmaalayaasha da 'kasta.
Waxa aanay dad badani garanayn, ama ugu yaraan sidan uga faa'iidaysan, waa taas TikTok waxaad ku kasban kartaa lacag. Haa, fiidiyowyada la sameeyay waxaad ku kasban kartaa waxyaabo dheeri ah dhamaadka bisha. Laakiin waa maxay sababta ay u soo jiidato dareenka badan?
Bilowgii, markii TikTok soo baxday, waxaa aad loogu arki jiray shabakad bulsheed oo loogu talagalay dhalinyarada ama dhalinyarada, maadaama inta badan fiidiyowyada la wadaago ay ahaayeen dad qoob-ka-cayaar, kaftan, kaftan, iwm. Si kastaba ha ahaatee, wakhtigu wuu socday, waxay u rogmatay nooc kale oo ka mid ah nuxurka, ka sii daran oo ka waxtar badan. Hadda, waxaad ka heli kartaa tabaha cunto karinta, cunto karinta, macluumaadka caafimaadka, iwm. Si kale haddii loo dhigo, way qaan gaadhay.
Ilaa heer in shirkado badan ayaa bilaabay inay sameeyaan xeelado suuqgeyneed si ay u gaaraan dhagaystayaashooda oo ay u gaaraan yoolkooda.
Oo intaas oo dhan ka sokow, maxaad noo sheegi lahayd haddii aan kuu sheegno sida lacag looga sameeyo TikTok?
Sida lacag looga sameeyo TikTok: siyaabaha kala duwan ee loo helo
Kuma sheegi karno in TikTok ay fududahay in lacag lagu sameeyo, sababtoo ah runtii maahan. Laakin ma aha wax aan macquul aheyn sidoo kale, haddii aad sameyso istiraatijiyad wanaagsan wax dhib ah kuma yeelan doontid inaad sameyso.
Dhab ahaantii Ma jirto hab kaliya oo lacag looga sameeyo TikTok, laakiin dhowr, oo halkan waxaan ka wada hadli doonaa oo dhan. Maskaxda ku hay in qaar badan oo iyaga ka mid ah aysan u baahnayn ugu yaraan kuwa raacsan ama wakhti ay ku jiraan akoonnada si ay awood ugu yeeshaan inay bilaabaan lacag-ururinta, taas oo muhiim ah oo lagu daray shabakadaha kale ee bulshada.
Iyada oo la adeegsanayo muuqaallo muuqaal ah
Waxa ugu horreeya ee aad samayn karto si aad lacag uga samayso TikTok waa inaad soo geliso fiidiyowyada. Haddii aad nasiib u yeelatid in mid ka mid ah uu fayruska galo, waxaad awoodi doontaa inaad lacag ku sameyso. Dabcan, kuma xirnaan doonto tirada taageerayaasha aad leedahay, laakiin waxay ku xirnaan doontaa aragtida muuqaalkaas.
Iyo imisa ayaad heli kartaa? Hagaag, runtu waxay tahay, ma noqon doonto wax kaa dhigaya inaad ka tagto shaqadaada. Qiyaastii 2-3 senti ayaa la bixiyaa 1000kii aragti, markaa haddii aad rabto inaad noqoto mid guulaysata, waa inaad maareysaa inaad soo geliso muuqaal maalinle ah oo aad gaadho hal milyan oo aragtiyood si aad u hesho 20-30 euros maalintii (taas oo noqon doonta inta u dhaxaysa 600 iyo 900 euro bishii).
Tani ma fududa, laakiin waxaa jira profiles ku guuleysta, markaa waa inaad heshaa oo aad aragto waxa ay sameeyaan si aad u raacdo istiraatijiyad kanaalkaaga.
Toos u tabin
Xaqiiqada ah in aad si toos ah u baahiso ma aha in shabakada bulshada ay ku siiso lacag, aad uga fog. Laakiin waxaad heli doontaa dad ku arka, haddii ay jecel yihiin waxaad samaynayso, ku siiyaan hadiyado macmal ah. Kuwan waxaa lagu helaa lacag la'aan iyo Isticmaale kastaa wuxuu ku iibsan karaa, lacag dhab ah, qadaadiicdaas uu markii dambe "siinayo" kuwa sameeya fiidiyowyada tooska ah.
Markaad hesho abaalmarintaas, TikTok wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ku beddelato qadaadiicdaas hadiyado ama sidoo kale lacag dhab ah, oo lagu soo diro Paypal.
Dabcan, si aad awood ugu yeelatid inaad sameyso fiidiyowyo toos ah waxaad u baahan tahay inaad buuxiso shuruudaha lagama maarmaanka ah: inaad leedahay in ka badan 1000 taageere. Haddii aadan haysan iyaga, ma awoodi doontid inaad hesho faa'iidooyinkaas mana haysan kartid suurtogalnimada kuwa nool (wax qof kastaa ku talinayo inuu gaaro wakhtiga ugu yar ee suurtogalka ah).
Noqo mid saameeya
Marka shabakada bulshada ay bilaabato inay soo baxdo, noqoshada saameyn ku yeelata waxay noqon kartaa mid aad u fudud, sababtoo ah ma lihid tartan badan. Dhibaatadu waxay tahay in dabadeed ay sii adkaato. Si kastaba ha noqotee, waa mid ka mid ah siyaabaha lacag looga sameeyo TikTok maxaa yeelay waxay kuu oggolaaneysaa shirkado, ganacsiyo, kafaala-qaadayaal, iwm. way ku eegayaan iyo Waxay rabaan inay ku siiyaan lacag aad ku xayaysiisaan, ama si fudud u sheegaan calaamadooda ama alaabta ay iibiyaan.
Dabcan, aad bay lagama maarmaan u tahay in la haysto tiro badan oo raacsan iyo aragtiyada fiidiyowyada tan iyo waxa ay rabaan waa inay gaaraan tirada ugu badan ee dadka.
Ogow waxa ay tahay? Waa hab ay shabakada bulshadu kuu leedahay inaad lacag ku hesho tixraac. Si kale haddii loo dhigo, qof kasta oo aad ku casuunto inuu ku soo biiro adigoo isticmaalaya koodkaagu wuxuu kuu ogolaanayaa inaad hesho lacag aad kaga furan karto Paypal ama xitaa aad ku shubi karto bangigaaga.
Immisa ayaad shaqaysataa qofkiiba? Waa hagaag Isbaanishka waxaad heleysaa hal euro casuumaad kasta oo la kulma oo soo gasha codsiga, marka haddii aad hesho saaxiibo badan waxaad ka heli kartaa meel wanaagsan app-ka.
Shaqadan waxaad ku leedahay profile-kaaga, waana inaad u soo dirtaa asxaabtaada, qoyskaaga iyo qof kasta oo doonaya code-kaas gaarka ah kaas oo hubin doona, marka ay soo dejiyaan app-ka oo ay sameeyaan akoon, waxaad heli kartaa lacagtaas.
Kuma sheegi karno in TikTok ay weligeed sii jiri doonto, ama ay si aad u wanaagsan u shaqeyn doonto si aad lacag u hesho, laakiin runtu waxay tahay inay ballan qaadayso nolol dhowr sano ah halkaas oo nuxurka isdhexgalka, taas oo ah, fiidiyowyadu, ay noqdeen mid ka mid ah inta ugu badan la isticmaalo.
Ma taqaanaa siyaabo badan oo lacag looga sameeyo TikTok? Waad noo sheegi kartaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka ECommerce » eCommerce » Ganacsiga bulshada » Sida lacag looga sameeyo TikTok
Maskaxda hoose: waa maxay
Waa maxay calaamad